Sawirro: Farmaajo oo gaaray Ethiopia iyo ujeedka safarkiisa - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Farmaajo oo gaaray Ethiopia iyo ujeedka safarkiisa
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maanta ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya.
Farmaajo iyo Wafdigiisa ayaa waxaa soo dhaweyn halkaas ugu sameeyey Wasiiro kala duwan oo ka tirsan Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Abiy Axmed iyo Safiirka Soomaaliya ee dalka Itoobiya Danjire Abdilahi Ahmed Jamac.
Sida lagu sheegay qoraalka kasoo baxay madaxtooyada, Farmaajo ayaa halkaas uga qayb galaya meertada 35-aad ee Shirweynaha Ururka Midowga Afrika, ee sanadkiiba mar la qabto.
Shirweynahan oo ay ka qayb-galayaan Hoggaamiyeyaasha dalalka Afrika iyo madax kale, ayaa looga arrinsanayaa dib-u-habaynta Ururka Midowga Afrika, hirgelinta hiigsiga Ururka ee sannadda 2063 iyo wax ka qabashada caqabaha kala duwan ee ay Qaaraddu wajahayso oo ay ugu horreeyaan rabshadaha, saboolnimada, cunno yarida iyo cudurka COVID-19.
Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday iyo Wafdigiisa ayaa soo bandhigi doona aragtida Soomaaliya ee ku aaddan mustaqbalka Qaaradda Afrika iyo dadaalada Soomaaliya ee ku wajahan la dagaallanka argagixisada, ka soo kabashada saamaynta COVID-19, wax ka qabashada fatahaadaha, ka gaashaamashada abaaraha iyo la dagaallanka ayaxa, kuwaas oo qeyb ka ah khataro ay wajahayso Qaaradda Afrika.
Wafdiga uu horkacayo Farmaajo ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa waxay kulan doceedyo la yeelan doonaan Hoggaamiyeyaasha dalalka Afrika iyo madaxda kale ee ka soo qayb-galaysa Shirweynahan Midowga Afrika.
Shirkan ayaa la rumeysan yahay inuu yahay kii ugu dambeeyey ee uu Farmaajo ka qeyb-galo haddii aan dib loo dooran, ayada oo Soomaaliya la filayo inay sanadkan yeelato madaxweyne cusub.
Qabashada shirkan ayaa muhiim u ah ra’iisul wasaraaha Ethiopia iyo “walaalka” Farmaajo Abiy Ahmed, sababtoo ah waxay muujin doontaa inay xasilloonida dib ugu soo laabaneyso dalka Ethiopia oo muddo sanad iyo bar ku dhow ay ka socdaan dagaallo sokeeye.
Dhowr bilood kahor, waxaa diblomaasiyiinta Reer Galbeedka ay ka digayeen in mucaaradka Ethiopia ee Tigray ay qabsan karaan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa, taasi oo keentay inay shaqaalahooda kala baxaan.
Si katsaba, xaaladda dagaal ayaa isbedeshay kadib markii ay Tigray-ga dib u gurteen kuna laabteen gobolkooda, taasi oo dolwadda nafis siiyey, islamarkaana soo afjartay cabsidii laga qabay inay la qabsado Addis Ababa.